joodar caleen - Moi Mili
Dukaankayaga internetka waxaad ka iibsan kartaa sariish caleen ah oo gacanta lagu duudduubay. Waxay u shaqeysaa sidii meel lagu ciyaaro da'da hore, waxay sidoo kale noqon kartaa roog qurux badan ama sariirta sariirta .. Joodariyaasha qurxoon ayaa dhameystir weyn u ah teendhooyinka Moi Mili.
Gogosha jilicsanaanta iyo raaxada leh ayaa lagu fidin karaa meel kasta - qolka fadhiga, dusha sare ama beerta. Sariiraha gogosha caleenta leh ee qaabeysan waxay si fiican ugu habboonaan doonaan barkimooyin iyo bannaano isku ururinta isla kaynta. Qodobbadaas waxaa loo sameeyay si gaar ah fiiro gaar ah oo faahfaahin ah.